नयाँ आइपीओमा आवेदन दिनु भो ? बिहीबार सम्म कति पर्यो रिभर फल्स पावरको शेयरमा आवेदन ? - Arthik Sandesh नयाँ आइपीओमा आवेदन दिनु भो ? बिहीबार सम्म कति पर्यो रिभर फल्स पावरको शेयरमा आवेदन ? - Arthik Sandesh
नयाँ आइपीओमा आवेदन दिनु भो ? बिहीबार सम्म कति पर्यो रिभर फल्स पावरको शेयरमा आवेदन ?
ब‌ैशाख २९, २०७९
काठमाडौं । रिभर फल्स पावरको आइपीओमा ७३ लाख ३१ हजार ४०० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार बिहीबार साँझ ५ बजेसम्ममा ६ लाख २१ हजार ८४४ जना सर्वसाधारणले ७३ करोड ३१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका हुन् । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि बुधबार वैशाख २८ गतेदेखि २५ लाख ३८ हजार ९०० कित्ता सेयर जारी गरेको हो ।
कम्पनीले प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका २७ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात ५४ हजार ६ सय कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ३६ हजार ५ सय कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी २५ लाख ३८ हजार ९ सय कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा जेठ ४ गते र ढिलोमा जेठ ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा १ लाख कित्तासम्म लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यसका साथै मेरो शेयर वेब तथा एप मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डबल बी माइनस आईएस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
यो कम्पनीको सेयरमा पनि माग भन्दा अधिक आवेदन पर्ने पक्का छ त्यसैले आवेदन दिँदा केबल 10 दिए पुग्ने देखिन्छ ।